လီဗာပူးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရောဘတ်ဆန် - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရောဘတ်ဆန်
ရောဘတ်တိုဖာမီနိုဟာ လီဗာပူး ရဲ့ ၃ ဦးတွဲ တိုက်စစ်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ဆာဒီယိုမာနေး ၊ မိုဟာမက်ဆာလား တို့ကြောင့် တိမ်မြှပ်မှု ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း အမှန်တကယ်တော့ ၎င်းဟာ လီဗာပူး ရဲ့ အသက် တစ်ခုလို ပါပဲ။ အန်ဒီရောဘတ်ဆန် လည်း ဖာမီနို ရဲ့ အရေးပါမှုကို ပြောပြသွား ခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ ဖာမီနိုသာ မရှိရင် သူတို့ အသင်း လမ်းပျောက် နေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဖာမီနို ဟာ လီဗာပူး အသင်းမှာ မာနေး ၊ ဆာလား တို့နဲ့ အတူ ဥရောပ ရဲ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် အတွဲ ဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးသူ ဖြစ်ပြီး ဘရာဇီး စတားရဲ့ ကစားဟန်ဟာ သူ့ရဲ့ တွဲဖက် တိုက်စစ်မှုးတွေနဲ့ မတူ ကွဲပြားလှပြီး ဖာမီနိုဟာ သွင်းဂိုးတွေ ရဖို့ထက် စာရင် အသင်း ကောင်းဖို့အတွက်ပဲ အစွမ်းကုန် ပေးဆပ် ကစားတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖာမီနိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က လီဗာပူး တို့ တပ်မိုးမှာ ၃-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ မာနေး ရဲ့ ဂိုးအတွက် ဖန်တီး ပေးခဲ့တဲ့ အပြင် သူကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဂိုး ၅၀ ပြည့်တဲ့ ပထမဦးဆုံး ဘရာဇီး ကစားသမား အဖြစ် မှတ်တမ်း ၀င်ခဲ့ပါတယ်။
ဖာမီနိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၄၁ ပွဲ ကစား ထားခဲ့ရာမှာ အသင်းဖော်တွေ အတွက် ၂၉ ဂိုး ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အသင်းရဲ့ သွင်းဂိုး ၇၉ ဂိုးမှာ တိုက်ရိုက် ပါဝင် ပက်သက်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူး ဘယ်နောက်ခံလူ ရောဘတ်ဆန် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အရည်အသွေးတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ သူမတူ တစ်မူထူးကဲတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရောဘတ်ဆန်က “သူ့ရဲ့ လုပ်အားနှုန်း ၊ သူ့ရဲ့ နည်းစနစ် ၊ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုး နဲ့ သူ့ရဲ့ နေရာစုံ လိုက်ပါကစားမှု တွေကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် သူ့လို ကစားသမားမျိုး နောက်တစ်ဦး ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်မိပါဘူး။ လူတွေကတော့ ဂိုးသွင်းပိုကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုးတွေ အကြောင်း ပြောကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက် ကတော့ သူလုပ်ပြ နေတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အသင်း အတွက် အရမ်းကို အရေးပါလှ ပါတယ်။ သူသာ မရှိရင် ကျွန်တော်တို့ လမ်းပျောက် နေပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ပါ။ သူဟာ အရာအားလုံးကို အစွမ်းကုန် အားထုတ် သူပါ။ ဒါဟာ ဘော်ဘီရဲ့ အလှ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အကုန်လုံး လုပ်နိုင်သူ ပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဖာမီနို ဟာ နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ စပယ်ရှယ် ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ၎င်းဟာ သူ့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လုပ်အားနဲ့ အတူ လီဗာပူး ကို high press ကောင်းတဲ့ အသင်း counter press အရမ်း ကောင်းတဲ့ အသင်း ဖြစ်စေ ခဲ့ပါတယ်။
ရောဘတ်ဆန် က “သူဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမ ခံစစ်စည်းပါ။ ဒီလို လုပ်ရာမှာ သူ့ထက် ပိုကောင်းတဲ့သူကို ကျွန်တော် မမြင် ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူဟာ ပြိုင်ဘက် နောက်ခံလူတွေကို press လုပ်ပြီး သူတို့ကို ဘောလုံး ကိုင်ကစားဖို့ အချိန် လုံးဝ မပေးပါဘူး။ ပြီးတော့ သူဟာ နောက်ထိဆင်းကာ ဘောလုံး ရယူပြီး ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကွင်းလယ် ကနေ တိုက်စစ် လမ်းကြောင်း ဖန်တီး ပေးပါတယ်။
သူဟာ ခံစစ်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အရမ်း အရေးပါတဲ့ သူပါ။ ဒါတွေ လုပ်ပြီးရင် သူဟာ ရှေ့ကို ပြန်တက် သွားပြီး ဂိုးသွင်းတာတွေ လုပ်သလို ဂိုးဖန်တီးမှုတွေလည်း လုပ်ပေး ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကလော့ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအကျော့မှာ ဖာမီနို ရဲ့ နေရာကို ၀င်ကစား ပေးခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ၀ိုင်နယ်ဒန်ဟာ သူ့အသင်းဖော်ရဲ့ လုပ်အားနှုန်းကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကလော့ က “ဖာမီနို ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှုတွေ ၊ သူ့ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ၊ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့ လုပ်အားနှုန်း တွေဟာ မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကောင်းမွန်လှ ပါတယ်။
ကျွန်တေ်ာတို့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဂျီနီဟာ သူ့နေရာကို ၀င်ကစား ခဲ့တာကို မှတ်မိ နေပါသေးတယ်။ ပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက် အ၀တ်လဲခန်း ထဲမှာ ဂျီနီဟာ ဖာမီနိုရဲ့ ဒီနေရာမှာ ကစားတဲ့ ပုံစံကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်နေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မယုံနိုင်စရာပါ! ဒါဟာ အရမ်းကို လုပ်အား ပြင်းထန်လွန်းတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ဦး ကိုယ့်နေရာမှာ ၀င်ကစားပြီး ဒီလို ပြောတာကို ခံရတာဟာ ကိုယ်ရနိုင်တဲ့ အကြီးမားဆုံး လေးစားခံရမှု ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ထရန်အလက်ဇန်းဒါး အာနိုးရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောဟာ ၀ုဒ်နဲ့ ထိကာ ဂိုးထဲ တန်းဝင် သွားခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးတို့ ဦးဆောင်ဂိုး ရခဲ့ပြီး အဲဒီနောက် ဖာမီနို ဟာ သူ့ရဲ့ အရည်အသွေးကို ပြသ သွားခဲ့ကာ ဘန်မီးရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှု အမှားကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး မာနေး ဂိုးသွင်း နိုင်ဖို့ အတွက် ဖန်တီးမှု လုပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် မိနစ် ၈၀ မှာတော့ ဘရာဇီး စတားဟာ ပင်နယ်တီ ဧရိယာ ထိပ်ကနေ အပြင်းကန်သွင်းကာ လီဗာပူး အတွက် ပွဲသိမ်းဂိုးကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ဒီအတွက်ကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ၁၃ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ နိုင်ပွဲဆက် စံချိန် ရသွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ မတိုင်မီ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်မှာ ရပ်တည် နေပါတယ်။
လီဗာပူးအတှကျ မရှိမဖွဈ အရေးပါတဲ့ ကစားသမား တဈဦးကို ပွောပွလိုကျတဲ့ ရောဘတျဆနျ
ရောဘတျတိုဖာမီနိုဟာ လီဗာပူး ရဲ့ ၃ ဦးတှဲ တိုကျစဈမှာ တဈခါတဈရံ ဆာဒီယိုမာနေး ၊ မိုဟာမကျဆာလား တို့ကွောငျ့ တိမျမွှပျမှု ရှိခဲ့ပမေယျ့လညျး အမှနျတကယျတော့ ၎င်းငျးဟာ လီဗာပူး ရဲ့ အသကျ တဈခုလို ပါပဲ။ အနျဒီရောဘတျဆနျ လညျး ဖာမီနို ရဲ့ အရေးပါမှုကို ပွောပွသှား ခဲ့ပွီး သူတို့ဟာ ဖာမီနိုသာ မရှိရငျ သူတို့ အသငျး လမျးပြောကျ နလေိမျ့မယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဖာမီနို ဟာ လီဗာပူး အသငျးမှာ မာနေး ၊ ဆာလား တို့နဲ့ အတူ ဥရောပ ရဲ့ ကွောကျစရာ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ အတှဲ ဖွဈအောငျ ပေါငျးစပျ ညှိနှိုငျးပေးသူ ဖွဈပွီး ဘရာဇီး စတားရဲ့ ကစားဟနျဟာ သူ့ရဲ့ တှဲဖကျ တိုကျစဈမှုးတှနေဲ့ မတူ ကှဲပွားလှပွီး ဖာမီနိုဟာ သှငျးဂိုးတှေ ရဖို့ထကျ စာရငျ အသငျး ကောငျးဖို့အတှကျပဲ အစှမျးကုနျ ပေးဆပျ ကစားတဲ့ ပုံစံ ဖွဈပါတယျ။
ဖာမီနိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စနနေကေ့ လီဗာပူး တို့ တပျမိုးမှာ ၃-၀ နဲ့ နိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ မာနေး ရဲ့ ဂိုးအတှကျ ဖနျတီး ပေးခဲ့တဲ့ အပွငျ သူကိုယျတိုငျလညျး တဈဂိုး သှငျးယူ ပေးခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ဂိုး ၅၀ ပွညျ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး ဘရာဇီး ကစားသမား အဖွဈ မှတျတမျး ၀ငျခဲ့ပါတယျ။
ဖာမီနိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ၁၄၁ ပှဲ ကစား ထားခဲ့ရာမှာ အသငျးဖျောတှေ အတှကျ ၂၉ ဂိုး ဖနျတီး ပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အသငျးရဲ့ သှငျးဂိုး ရ၉ ဂိုးမှာ တိုကျရိုကျ ပါဝငျ ပကျသကျသူ ဖွဈပါတယျ။ လီဗာပူး ဘယျနောကျခံလူ ရောဘတျဆနျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အရညျအသှေးတှဟော ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ သူမတူ တဈမူထူးကဲတဲ့ ကစားသမား ဖွဈစတေယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ရောဘတျဆနျက “သူ့ရဲ့ လုပျအားနှုနျး ၊ သူ့ရဲ့ နညျးစနဈ ၊ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုး နဲ့ သူ့ရဲ့ နရောစုံ လိုကျပါကစားမှု တှကေို ကွညျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျ သူ့လို ကစားသမားမြိုး နောကျတဈဦး ရှိတယျလို့ ကြှနျတျော မထငျမိပါဘူး။ လူတှကေတော့ ဂိုးသှငျးပိုကောငျးတဲ့ တိုကျစဈမှုးတှေ အကွောငျး ပွောကွမှာ ဖွဈပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ ကတော့ သူလုပျပွ နတောတှဟော ကြှနျတျောတို့ အသငျး အတှကျ အရမျးကို အရေးပါလှ ပါတယျ။ သူသာ မရှိရငျ ကြှနျတျောတို့ လမျးပြောကျ နပေါလိမျ့မယျ။ သူဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ပါ။ သူဟာ အရာအားလုံးကို အစှမျးကုနျ အားထုတျ သူပါ။ ဒါဟာ ဘျောဘီရဲ့ အလှ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အကုနျလုံး လုပျနိုငျသူ ပါပဲ။” လို့ ဆိုလျိုကျပါတယျ။
ဖာမီနို ဟာ နညျးပွ ယာဂနျကလော့ ရဲ့ စပယျရှယျ ကစားသမား ဖွဈပွီး ၎င်းငျးဟာ သူ့ရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ လုပျအားနဲ့ အတူ လီဗာပူး ကို high press ကောငျးတဲ့ အသငျး counter press အရမျး ကောငျးတဲ့ အသငျး ဖွဈစေ ခဲ့ပါတယျ။
ရောဘတျဆနျ က “သူဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပထမ ခံစဈစညျးပါ။ ဒီလို လုပျရာမှာ သူ့ထကျ ပိုကောငျးတဲ့သူကို ကြှနျတျော မမွငျ ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူဟာ ပွိုငျဘကျ နောကျခံလူတှကေို press လုပျပွီး သူတို့ကို ဘောလုံး ကိုငျကစားဖို့ အခြိနျ လုံးဝ မပေးပါဘူး။ ပွီးတော့ သူဟာ နောကျထိဆငျးကာ ဘောလုံး ရယူပွီး ကြှနျတျောတို့ အတှကျ ကှငျးလယျ ကနေ တိုကျစဈ လမျးကွောငျး ဖနျတီး ပေးပါတယျ။
သူဟာ ခံစဈပိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ အရမျး အရေးပါတဲ့ သူပါ။ ဒါတှေ လုပျပွီးရငျ သူဟာ ရှကေို့ ပွနျတကျ သှားပွီး ဂိုးသှငျးတာတှေ လုပျသလို ဂိုးဖနျတီးမှုတှလေညျး လုပျပေး ပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ကလော့ ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျ ပထမအကြော့မှာ ဖာမီနို ရဲ့ နရောကို ၀ငျကစား ပေးခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ ၀ိုငျနယျဒနျဟာ သူ့အသငျးဖျောရဲ့ လုပျအားနှုနျးကို အံ့သွတကွီး ဖွဈခဲ့တယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ကလော့ က “ဖာမီနို ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခမြှုတှေ ၊ သူ့ရဲ့ နညျးစနဈပိုငျး ဆိုငျရာ ၊ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျး ဆိုငျရာ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကွီးမားလှနျးတဲ့ လုပျအားနှုနျး တှဟော မယုံနိုငျစရာ ကောငျးလောကျအောငျ ကောငျးမှနျလှ ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ ဂြီနီဟာ သူ့နရောကို ၀ငျကစား ခဲ့တာကို မှတျမိ နပေါသေးတယျ။ ပှဲပွီးဆုံးပွီးနောကျ အဝတျလဲခနျး ထဲမှာ ဂြီနီဟာ ဖာမီနိုရဲ့ ဒီနရောမှာ ကစားတဲ့ ပုံစံကို အံ့သွတကွီး ဖွဈနေ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ မယုံနိုငျစရာပါ! ဒါဟာ အရမျးကို လုပျအား ပွငျးထနျလှနျးတယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
တဈစုံတဈဦး ကိုယျ့နရောမှာ ၀ငျကစားပွီး ဒီလို ပွောတာကို ခံရတာဟာ ကိုယျရနိုငျတဲ့ အကွီးမားဆုံး လေးစားခံရမှု ပါပဲ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
ထရနျအလကျဇနျးဒါး အာနိုးရဲ့ ဖွတျတငျဘောဟာ ၀ုဒျနဲ့ ထိကာ ဂိုးထဲ တနျးဝငျ သှားခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူးတို့ ဦးဆောငျဂိုး ရခဲ့ပွီး အဲဒီနောကျ ဖာမီနို ဟာ သူ့ရဲ့ အရညျအသှေးကို ပွသ သှားခဲ့ကာ ဘနျမီးရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှု အမှားကို အခှငျ့ကောငျး ယူပွီး မာနေး ဂိုးသှငျး နိုငျဖို့ အတှကျ ဖနျတီးမှု လုပျပေး ခဲ့ပါတယျ။
ပှဲခြိနျ မိနဈ ၈၀ မှာတော့ ဘရာဇီး စတားဟာ ပငျနယျတီ ဧရိယာ ထိပျကနေ အပွငျးကနျသှငျးကာ လီဗာပူး အတှကျ ပှဲသိမျးဂိုးကို ရယူပေးခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူးဟာ ဒီအတှကျကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ၁၃ ပှဲဆကျ နိုငျပှဲနဲ့ အတူ နိုငျပှဲဆကျ စံခြိနျ ရသှားခဲ့ပွီး နိုငျငံတကာ ပှဲစဉျတှေ မတိုငျမီ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲနဲ့ အတူ အမှတျပေးဇယား ထိပျမှာ ရပျတညျ နပေါတယျ။